XOG:-Dalal ka aamusay cunaqabateynta hubka ee lagu kordhiyay Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Kulan ay ku yeesheen Magaalada New York ee Dalka Mareykanka Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobey ayaa waxaa ay haa ugu codeeyeen in mudada loo kordhiyo cunaqabateynta dhinaca hubka ah ee saaran Soomaaliya.
Golaha amaanka ee Qaramada Midoobey ayaa mudo hal sano ah ku kordhiyey cunaqabateyntaas,waxaana jiray dalal ka aamusay inay u codeeyaan in mudada loo kordhiyo cunaqabateynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya.
Shabada Mareeg.com ayaa heshay Magacyada dalalka qaraarkaas ka aamusay,waxaana ay kala yihiin dalalka,Ruushka, China iyo Equatorial Guinea,waxaana sababaha ay uga aamuseen ay ku sheegeen inay ku jiraan waxyaabo lidi ku ah xaquuqda Bani’aadamka.
Ugu dambeyn Golaha ayaa waxaa ay cambaareeyeen hubka iyo rasaasta sharci darada ee loo dhoofiyo Soomaaliya ee xadgudubka ku ah cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya.